Malunga nathi -Fujian Shengyang Imibhobho Technology Co., Ltd.
UFujian Shengyang Umbhobho weTekhnoloji Co., Ltd.
I-Fujian Shengyang Pipeline Technology Co, Ltd. yasekwa ngo-2007. Ibekwe kwiZiko loTyalo-mali iFuzhou Yuanhong eFujian, kufutshane nesikhululo seenqwelomoya iFuzhou Changle. Kukumizuzu engama-40 kuphela ukusuka ePingtan Comprehensive Testingental Reform Zone, kwaye inendawo eyodwa ngokwejografi. Inkampani inemali ebhalisiweyo ye-10.88 yezigidi ze-yuan. Ukusuka kwindawo yokuvelisa encinci, iye yaphuhliswa yishishini lesizwe eliphezulu lobuchwephesha eligxile ekwenziweni kwemibhobho yeplastiki entsha. Ngo-2011, inkampani yaseka isiseko semveliso kummandla kumzantsi-ntshona we-Changming Economic Development Zone e Guizhou, yaye yaseka Guizhou Shengyang Umbhobho Technology Co., Ltd. ngaxeshanye e Beijing, Shanghai, Guangzhou, Kunming, Changsha, Xi ' an, Chongqing, Jiangxi kunye namanye amaphondo amakhulu kunye nezixeko zokuseka amasebe kunye neeofisi, uthungelwano lokuthengisa kwilizwe liphela.
Emva kweminyaka yophuhliso oluqhubekayo kunye nokuyila, uthotho lwemveliso lugqityiwe, lubandakanya uthotho lombhobho weplastiki onje nge-PE / PP / unikezelo lwamanzi e-PVC, umjelo, igesi, imigodi, imichiza, umasipala kunye namandla ombane. Ibhanti yentsimbi eqinisiweyo yenziwe ngombhobho odityanisiweyo uneenkcukacha ezipheleleyo, kwaye ukusebenza kwemveliso kunezibonelelo zombini zentsimbi kunye neplastiki. Elona xabiso liphezulu lemveliso yombhobho wokuhambisa amanzi weHDPE linokufikelela kwi-001200, ubuninzi be-drainage kunye nenkqubo yogutyulo ifikelela kububanzi obungaphakathi Ф2400, kwaye izixhobo zombhobho zigqityiwe.
Umbhobho weShengyang uthatha ukutsha kwitekhnoloji yemveliso kunye nokusetyenziswa njengesiseko senkampani. Ihlala igcina isantya kunye nobuchwepheshe obuphambili beeplastiki zangaphandle, kwaye ithatha ukuphuhliswa kunye nokusetyenziswa kwezinto ezintsha zokwakha iikhemikhali njengolwalathiso oluphambili kwishishini. Ukufunxa ubuchwepheshe obuphambili kunye nokuphucula ukhuphiswano lwentengiso lweshishini liphela. Inkampani ipasile i-ISO9001, i-ISO14001, isatifikethi se-OHS18001 kunye nemveliso yeleyibhile yemveliso yase China. Ngo-2018, yanikezelwa i- "Top 500 Chinese" kwaye iyunithi yephondo ewonga kwaye ithembekile. I-Shengyang Lab iye yavunywa yiNkonzo yokuQinisekiswa kweSizwe yase China kuVavanyo lweKhomputha.
Oko yasekwa, iFujian Shengyang Pipeline Technology Co, Ltd. ibambelela kwifilosofi yeshishini yokuthatha umgangatho njengesiseko, abathengi njengeyona nto iphambili, ubuchule njengomphefumlo, kunye nenjongo yokudala ixabiso kubathengi. Qhubeka uphucula inqanaba lolawulo lweshishini, ngesiqalo esitsha, isantya esiphezulu, inkonzo engcono kwinkangeleko entsha yehlathi leshishini.